21 Qodobbada Salaadda ee loogu talagalay waalidiinta | MADAXWAYNAHA ADDUUNKA
Bogga ugu weyn Dhibcaha salaadda 21 Qodobbada Salaadda ee loogu talagalay waalidiinta
21 Qodobbada Salaadda ee loogu talagalay waalidiinta
SHARCIGA KUNOQOSHADIISA 5:16 Aabbahaa iyo hooyadaa u maamuus sidii Rabbiga Ilaahaaga ahu kugu amray. si cimrigaagu u dheeraado, oo aad u nabdoonaatid dalka Rabbiga Ilaahaaga ahu ku siiyo.
Maanta waxaan eegi doonaa meelaha loo duceeyo waalidiinta. Annagoo ah carruurta Ilaah, waxaan u baahan nahay inaan had iyo goor istaagno faraqa u dhexeeya guusha iyo wanaagga guud ee waalidiinta. Mid ka mid ah dariiqooyinka ugu waaweyn ee loo muujiyo daryeel iyo jacaylka waalidiintaada waa inaad u duceyso iyaga, inay markasta shafeeco ka dhigto wanaaggeeda. Markasta oo aad u duceyso waalidiintaada, waxaad abuurtaa abuurka nolosha dheer iyo nolol farxad leh. Marwalba waad u duceyn kartaa waalidiintaada welina waad ku adkaan kartaa silicaas. Iyadoo aan loo eegin xaaladdooda jir ahaaneed ama ruux ahaaneed, u ducee iyaga, iyadoo aan loo eegin inay meel kuugu wanaagsan yihiin ama ayan u duceyn iyaga, xitaa haddii waalidiintaadu suunka iyo saaxiriin, iyaga u ducee. Hadday xanuunsadaan, u ducee iyaga Isagoo caafimaad, haddii ay sabool yihiin wax u quudi, haddii ay yihiin kuwa aan rumaysnayn, u barya badbaadadooda. Xaalad kastoo ay doonto ha noqotee, marwalba u ducee waalidkaa. Tilmaamahaan salaadda ee waalidiinta ayaa kaa caawin doona sida aad waalidiintaada ugu go'ay weligiis Rabbiga.
Waa nasiibdarro in adduunka aan maanta ku nool nahay, rumaystayaal badan ay waalidkood halkaas uga baxeen. Iyagu dan kama qabaan sida ay uga badbaadaan, kuwanu waa wax khatar badan leh in la sameeyo, Ilaah wuxuu inaga rajeynayaa in aan ixtiraamno waalidkeen, tallaabadaasina waa amarka keliya ee leh ballan. Markaan ixtiraamno waalidkeenna, cimrigeenna waxaan ugu kordhinaynaa Dunida. Markaad maamuusid waalidiintaada, taasi waa inaad adigu daryeesho iyaga jir ahaan, shucuur ahaan, dhaqaale ahaan iyo damiir ahaanba, waxaad ku beeranaysaa abuur ifaf dheer iyo barwaaqo Dhulka. Ma ku noolaan kartid nolol aad u deggan oo aad ku noolaan karto waaliddiintuna way ku sii adkaan doonaan tuulada, waxaad u soo jiidan kartaa inkaar waalidkaa. Ujeeddooyinkan salaadda ee waaliddiinta waxay awood kuu siinayaan inaad daryeesho waalidiintaada xagga diinta. Sidaad u tukanaysid iyaga si joogto ah, waxaad arki doontaa iyagoo ku sii xoogeysanaya magaca Ciise.
1. Aabe, waad ku mahadsantahay nolosha waalidkey magaca Ciise
2. Aabe, naxariistaada, waxaan kaa baryayaa inaad i daahiriyo oo ducadayda kugu aqbalo magaca Ciise
3. Aabbe, u naxariiso waalidkay si kasta oo ay u dhici waayaan ammaantaada magaca Ciise
4. Aabe waalidkey waxaan kugu dhaarinayaa gacmahaaga magaca Ciise
5. Waxaan ku qariyaa waalidkey dhiiga ciise, magaca ciise.
6. Waxaan maanta cadeynayaa in hub kasta oo loo sameeyay waalidkey aan lagu badin doonin magaca Ciise.
7. Waan canaantaa cudurrada iyo cudurada ku dhaca nolosha waalidkey magaca Ciise
8. Waxaan dib ugu soo celiyaa diraa hadda !!! Fallaadho kasta oo shaydaan ah ayaa u soo diray inay waalidkay ku weeraraan magaca Ciise.
9. Waalidkaygu waxay arki doonaan Ciise carruurtayda iyo caruurtayda carruurtooda caafimaad ku leh magaca Ciise
10. Waalidkay waaye wax wanaagsan oo magaca Ciise kuma dhex lumi doonaan
11. Waan ka difaacaa waalidkay hada cudur kasta oo da 'ah oo ku dhaca magaca Ciise
12. Waalidkay waxay arki doonaan halkaas oo carruurtu ku guuleystaan ​​oo dhan waqtiga noloshu magaca Ciise.
13. Waxaan cadeynayaa waalidkey inay si xoog leh ku barakeeyeen magaca ciise
14. Waxaan cadeynayaa in waalidkey si xoog ku dheehan tahay loogu mahad naqay magaca Ciise
15. Waxaan cadeynayaa waalidkey inay si xoog leh ilaalin doonaan magaca Ciise
16. Waalidkay waligood waligood ku aasi maayo halkaas oo ku qoran magaca Ciise
17. Waalidkay waligood dhib kuma noqon doonaan gacanta cadaawayaasha magaca Ciise
18. Waalidkay waxay Rabbiga ugu adeegi doonaan noloshooda oo dhan magaca Ciise.
19. Waalidkaygu way diidi doonaan cibaadada sanamyada inta ay nool yihiin oo dhan magaca Ciise.
20. Waxaan cadeynayaa waalidkey inay ku barakoobeen wax kasta oo ay ku jiraan duqnimada magaca Ciise.
21. Waalidkaygu labaduba waa inay ku nool yihiin si ay ugu dabaaldegaan dhalashadooda 100aad ee caafimaadka iyo muhiimadda magaca Ciise.
Waad ku mahadsan tahay Ciise salaadda jawaabta.
article Previous30 Qodobbada Salaadda oo loogu talagalay Horumar nolosha
Next article30 Qodobbada Salaadda ee Kobcinta Ganacsiga
50 Dhibcood oo Salaadda loogu talagalay Calaamadaha Mucjisooyinka iyo Mucjisooyinka
30 Qodobbada Salaadda oo loogu talagalay Samatabbixinta Qoyska
70 La Qabsashada Qodobbada Salaadda ee Xoogan
5 Saamaynta Muhiimka ah ee Golac uu ku yeeshay Nolosha Qofka Muuminka ah